Iimaphu zikaGoogle ngoku ngeNkxaso yeKML | Martech Zone
Iimaphu zikaGoogle ngoku ngeNkxaso yeKML
Lwesine, Disemba 7, 2006 NgoLwesine, uJuni 12, 2014 Douglas Karr
Ngamaxesha anje, ndiyazi ukuba ndingu-geek! Namhlanje i Ikhowudi yeKhowudi kaGoogle Ndisandula ukubhengeza ukuba ngoku baxhasa iifayile zeKML.
"Doug, hlisa umoya", utsho!
Andikwazi! Ndikhululekile! Apho ubukade kufuneka ucwangcise amanqaku emephini, ngoku 'ngokulula' ukhomba kwifayile ye-KML kwaye iimephu zikaGoogle ziya kuyicwangcisa ngokuzenzekelayo kwimephu yabo.
"Ewe, ngokuqinisekileyo", utsho!
Nanku umzekelo wefayile ye-KML:
UDoug Ngaba uyazi ukuba bavule nje i-Au Bon Pain kanye apha?
Ndisebenzisa iimephu zikaGoogle, ndalatha nje imephu ukubuza ifayile yam ye-KML:
"Wow", ekugqibeleni utsho! (Ndiyathemba!)
Nantsi oku kubonakala ngathi:
Ngokukrakra bantu. Apho iXML yifomathi yokutshintshiselana ngedatha, i-KML (ethi is XML) yifomathi yokutshintshiselana ngedatha yendawo yonke. Eli linyathelo elihle eliya phambili. Sebenzisa ezinye iinkqubo ze-GIS, abantu banokuvelisa iifayile ze-KML kwaye emva koko bazivule ngokulula kwi-Intanethi ngeGoogle Maps.
tags: Imephu yesayithi kaGoogleGoogle +KMLkml ifayileeKhayaSitemap.xml
Ubude beDilesi ye-imeyile
Ngomhla wama-7 ku-Disemba 2006 ngo-1: 37 AM
Uyenza ibonakale ilungile… ndikhombise kwicala lokwenza ifayile ye-kml kwaye ndinokuvuma ngokupheleleyo…
Ngomhla wama-7 ku-Disemba 2006 ngo-11: 08 AM
Yipoyinti elungile! Ndiza kuhlaziya iposti ngemiyalelo, vula ifayile ye-KML endiyiposileyo kwaye uza kubona ubume. Ifayile ye-KML ngumbhalo oluhlaza. Kukho iifayile zeKMZ phaya. Ezi ziifayile ze-KML ezifakwe kwiziphu zokudlulisa ngokukhawuleza (ukuba unefayile enkulu).
Ngomhla wama-7 ku-Disemba 2006 ngo-2: 50 PM
Ipholile loo nto! Baza kucinga ntoni ngokulandelayo?
Ngomhla wama-7 ku-Disemba 2006 ngo-4: 19 PM
Inqaku elinye endilibele ukulikhankanya kukuba ifayile ye-KML inokulungiswa okanye ivulwe ngeGoogle Earth ngokunjalo, isicelo sasimahla se-GIS desktop! Unokuzikhuphelela i-beta yamva nje apha:
UAswin van Braam
Mar 2, 2007 ngo-3: 29 AM
Oku kuhle kakhulu!
Ukuzibuza nje, kutheni le nto ifayile ye-KML inovakalelo. Ukuba wenza ifayile yeXML enee-tag ezinamagama amancinci aqala oonobumba. IXML / KML ayisebenzi. (nantso into endivuyisayo: D)
Mar 2, 2007 ngo-8: 37 AM
Ndiyiqaphele le nto. Kuyafana negeotag. Andinalwazi lokuba kutheni beya kuthi banyanzelise oonobumba abakhulu kumgangatho. Bendihlala ndicinga ukuba kukhuselekile koonobumba abancinci (kunokuba ngaphezulu), kodwa ezinye zezi nkonzo zikhona zilungile.
Mar 9, 2007 ngo-10: 39 AM
Ndifumene indlela yokwenza oku kusebenze.
Ndifumene inkqubo encinci yasimahla (xt.exe) esebenza nefayile yeXSL enokuguqula i-XML engasebenziyo kwifayile ye-KML esebenzayo.
Kwifayile ye-XSL (isimbo sohlobo) inika isiseko sokusebenza kwe-xml. Ndingaziguqula iithegi ezincinci ezisezantsi kunye neelegi eziphezulu. Ngesenzo sokunika igama kwakhona kwifayile ye-xml (xml ukuya kml) ufumana ifayile ye-kml esebenzayo
Meyi 12, 2007 kwi-1: 38 AM
ukuba ngasizathu sithile awuyibonanga, into entsha ye-google mymaps thingy ikuvumela ukuba wakhe imephu kwaye uthumele ngaphandle ifayile ye-kml.
Ukusukela oko iGoogle api masenze imephu kwindawo yakho eyakhelwe kwifayile ye-kml eyabanjwayo… konke oko kuba lula.